साहोका फ्यानलाई प्रभासको ठूलो सरप्राइज गिफ्ट !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। प्रभास र श्रद्धा कपूरको फिल्म साहो यस वर्षका ठूला फिल्ममध्येको एक हो । यो फिल्मको प्रतिक्षामा करोडौं फ्यान छन् । फिल्मको टिजर केही समय अगाडि रिलिज भएको थियो । टिजर रिलिजपछि फ्यानको उत्साह अझै बढेको छ । फ्यानहरु प्रभास र श्रद्धाको जोडी हेर्न आतुर छन् ।
यही बीच प्रभास फ्यानहरुका लागि एउटा ठूलो सरप्राइज लिएर आएका छन् । साहो फिल्मको साथसाथै यसको गेम पनि आउने भएको छ । यो गेमको पोस्टर पनि सार्वजनिक भएको छ । गेम र एक्सनप्रेमीहरुले यो गेम निकै रुचाउने विश्वास गरिएको छ । गेम छिटै रिलिज गरिने बताइएको छ ।